Kormeerka Sumcadda Sare ee Suuqgeeyayaasha Emailka. Martech Zone
Isniin, February 2, 2015 Khamiista, Sebtember 1, 2016 Douglas Karr
Waxaan ka qornay 250ok waqtiyadii hore waxayna sii wadaan inay sare uqaadaan waxyaabaha ay dadka u fidinayaan. Inta badan suuqgeyaasha emayllada waaweyn xitaa kuma baraarugsana inay yeelan karaan boqolley aad u sarreysa, laakiin emaylkooda ayaa ku dhegi kara shaandhada SPAM. Samatabbixin waxay si fudud uga dhigan tahay fariinta la keenay delivered ma ahan inay sameysay sanduuqa. In kasta oo xalalka kale ee meeshan qaali yihiin, 250ok waa xal la awoodi karo taasi waxay bixisaa xitaa awoodo dheeri ah - iyo ku dhawaaqista maanta ee sumcaddooda sumcadda emaylku waxay qaadataa darajo kale!
Xog-hayaha Sumcadda ayaa ku siinaya aragga iyo garashada aad u baahan tahay si loo garto howlaha dirista dhibaatada leh ee ku jira durdurrada boostadaada ee socdaalka iyo waliba isku dayga been abuurka ama dirista aan sharciyeysnayn ee dhaawici karta sumaddaada. Amaan kaamil ah noo sanduuqa sanduuqa iyo qalabka kormeerka liiska madow, Macluumaadka Sumcad wuxuu kormeeraa cinwaanadaada IP-gaaga iyo cinwaanadaada wuxuuna siiyaa faahfaahinta lagama maarmaanka u ah in la qaado tallaabo sixitaan ah markii dhibaato timaado.
250ok waa lammaane naga mid ah - waxaan u isticmaalnaa inaan ku kormeerno kuweenna sumcadda emailka - iyo astaantan cusub waxay siinaysaa suuqgeeyayaasha emaylka laba qalab oo maareyn sumcad oo gaar ah - awood u leh inay la socdaan calaamaddooda ka dhanka ah dirista khiyaanada iyo dabinnada spam.
Ka ilaali Sumcaddaada Phishing, Spamming iyo Spoofing
250ok Sumcadda Macluumaadka ayaa u oggolaanaysa suuqgeeyayaasha emaylka iyo adeeg bixiyayaasha emaylka inay la socdaan meelihii ay ku xirnaayeen email-lada aan la oggoleyn ama isku dayga phishing. Ka warbixintu waxay kuu oggolaaneysaa inaad aragto halka ay ka imaaneyso waraaqaha khiyaanada ah - oo ay burburiyeen IP iyo waddanku. Waad eegi kartaa xiriiriyeyaasha farriinta oo aad arki kartaa halka ay spamersku isku dayayaan inay u maraan macaamiishaada.
Ka ilaali Noocaaga Dabinnada Khayaanada Emailka
Ka ilaali liistada emaylka macmiilka cinwaanada emayllada ah ee lagu daray si aad ugu dhejiso astaantaada oo aad ugu dhegto dabinnada 'SPAM' ee keena keenista liidata ama gebi ahaanba xannibaadda Bixiyeyaasha Adeegga Internetka. 250ok's Sumcadda Xogta waxay u oggolaaneysaa suuqgeeyayaasha emaylka inay ka helaan aragti muhiim ah howlahooda farriimaha dibadda iyo inay aqoonsadaan arrimaha saameeya sumcadooda.
Waad hubin kartaa liistada emaylkaaga oo aad si fudud u arki kartaa IP-yada, cinwaanada emaylka, iyo cinwaanada dirista waraaqda xun. Haddii aad tahay Adeeg Bixiye Email, waxaad sidoo kale arki kartaa haddii macaamiishaadu ay leeyihiin aqoonsi sax ah (DKIM, diiwaanada SPF) meesha. Dhammaan macluumaadka sumcadda waxaa loo dhoofin karaa farriimaha shaqsiga ah.
Haddii aad dirayso boqolaal kun oo emayl bishiiba, waxaa laga yaabaa inaad lacag badan kaga tagto miiska adigoon la socon sumcadda emaylkaaga. Saxiix demo ah 250ok maanta!
Tags: 250oksumcadda emailkamaareynta sumcadda emaylkaphishingkormeerka phishingspamdabinka spam